Xaalada Magaalada Beledweeyne Waxaa Ka Jira Isbar-baryaac Siyaasadeed
October 31, 2018 F.G 0
Duqa degmada Balaweyne ee gobolka Hiiraan Cali Cabuqaadir Faarax oo shir jaraa’id ku qabtay Baladweyne ayaa shaaciyay in uu si cad kaga soo hor jeedo xil ka qaadista uu ku sameeyay Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan. Waxa uu sheegay in ay been abuur tahay eedeymaha uu Gudoomiyahya Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Daba-geed) usoo jeediyay, eedeymahaasi oo ahaa wax is dabba marin lagu sameeyay canshuuraha laga soo aruuriyo Degmada Baladweyne. “Waa eedeymo been abuur ah waayoo maamulka degmada muddo sideed billood ah muunan shaqeyn hada ayaan qoranay shaqaallo cusub mana jirto wax canshuuro ah oo la is dabba mariyey” ayuu sheegay Cali Cabuqaadir Faarax. Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar(Dabageed) ayaa maanta soo saaray warqad uu shaqada uga joojiyay duqa degmada Baladweyn,xoghayaha Dowlada Hoose iyo weliba Agaasimaha Waaxd Dhul Bixinta. Qoraal ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa lagu sheegay shaqo joojintan gaar ahaan duqa magaalada Beledweyne Cali Cabdulqaadir Faarax, xoghayaha Dowlada Hoose Cabdixakiin Maxamuud Xasan iyo Agaasimaha Dhul Bixinta Xuseen Maxamed Fiidow. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa gelinkii dambe ee maanta soo saaray amar lagu [Sii aqri]
Dowlada Turkiga Oo Sheegtay “Wariye Khashoggi si dhaqsi ah ayaa ceeji Loogu Dilay Markii uu galay Qunsuliyada”
Warkii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga soo baxa dowlada Turkiga ee la xiriira dilkiia Jamal Khashoggi ayaa lagu sheegay in la ceejiyay isla markii uu gudaha u galay qunsuliyada Sacudiga ee Istanbul kadibna meydkiisa la jarjaray. Akhbaartan oo laga soo saaray xafiiska xeer ilaaliyaha magaalada Istanbul Arbacada maanta ayaa sidoo kale lagu yiri; “Sidii horeba u ahaa qorshaha saxafiga Jamal Khashoggi si deg-deg ah ayaa ceeji nafta loogaga qaaday kadib markii uu u galay qunsuliyada guud ee Sacudi Carabiya ee magaalada Istanbul 2dii bisha Oktoobar 2018 arrimo la xiriira dukumintiyo guur.” “Meydka dhibanaha waa la jarjaray kadib markii ceejida nafta loogaga gooyay sidii uu qorshuhu ahaa.”ayaa la sii raaciyay. Xafiiska xeer ilaalinta Istanbul ayaa waxaa uu sidoo kale ka hadlay kulan ay lahaayeen dambi oogaha guud ee Sacudi Carabiya Saud Al-Mujab inaysan ka soo bixin wax natiijo ah. Dambi Oogaha guud ee Sacudi Carabiya ayaa dib ugu laabtay dalkiisa kadib saddex maalmood oo uu booqasho ku joogay dalka Turkiga,waxayna dowlada Turkigu ka dalabtay in loo soo gacan geliyo 18ka ruux ee lala xiriirinayo [Sii aqri]
Mamulka Juballand Oo Digniin Bixiya Musharaxiinta doorashada Madaxweynaha Maamulkaas
October 31, 2018 M.Jo 0
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa digniin ka soo saaray doorashada madaxweynaha cusub ee maamulkaas isagoo la hadlayey saraakiisha ciidamada ee ka kooban Daraawiishta, Nabad-sugidda iyo Booliiska. Wasiirka ayaa si faahfaahsan uga hadley inaysan ciidamadu qabiil iyo siyaasad midna shaqo ku laheyn ilaalinta amaanka dalka iyo dadkana ay shaqadoodu tahay waajibna ka saran yahay. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegey in aysan Jubbaland ka dhici karin sida hadda ka dhacdey magaalada Baydhabo oo ay dhawaan doorasho ka dhici doonto taasoo ay Dowladda federaalka ahi gaysey musharaxiin wata gaadiid iyo ciidan u gaar ah. Wasiirka ayaa sheegey in qof kasta oo isu soo sharaxaya xilka madaxtinimada Jubbaland uu xor u yahay inuu yimaado magaalada Kismaayo isagoo aan ciidan iyo wax khalkhal galinaya amniga la socona u ka soo dego garoonka lana soo dhaweynayo. Wasiirka ayaa sheegey haddii la isku dayo tan Baydhabo ka dhacdey oo kale in garoonka laga celin doono musharaxiinta noocaas u dhaqma amniga iyo xasiloonida Jubbaland-na aan looga indha qarsan karin shakhsi u soo diyaar garoobey khalkhal galinta amniga gobolka.
Nicholas Hyssom:“Soomaalida Xal Ha u Raadiyaan Dhibaatooyinka Dhexdooda Ka Jira”
Kadib safarkiisii ugu horeeyey ee qorsheysnaa kaasoo uu Nicholas Hyssom ku tagay mid kamid ah maamul goboleedyadea dalka ayaa waxa uu wakiilka gaarka ah ee QM u qaabilsan Somalia u baaqay soomaalida inay u wada shaqeyan si wada jir ah si ay xal ugu helaan dhibaatooyinkooda. Wakiilka ayaa booqasho ku tagay magaalada Kismaayo oo ah caasimadda maamul goboleedka Jubbaland oo dhaco koofurta Somalia waxaana safarkiisa ku wehlinayey ergeyga gaarka ah ee midowga Africa u qaabilsan Somalia Francisco Madeira. “Waan ogahay in Somalia aysan aheyn Mugadishu, Mugadishu-na aysan aheyn Somalia – waxaa lagama maarmaan ii ah aniga inaan booqdo maamul goboleedyada si aan usoo arko shaqaalaheyga, iyo sida ay u nool yihiin Somalida anigoo tagaya dalka oo dhan,” Mr. Haysom ayaa sidaas yiri. “Waxaan sidoo kaIe halkaan u imaaday xaaladda adag ee xiriirka ka dhaxeeya dowladda dhexe maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana halkan igu wehlinaya Ambassador Francisco Madeira oo ka socda Midowga Africa sababta aan halkaan u imaanay ayaa ah inan dhiiri gelino dhamaan qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Somalia si ay ugu shaqeeyaan si [Sii aqri]
Ciidamada xoogga Oo Looga Digay in ay Ku Milmaan Doorashada Koonfur Galbeed
Taliska ciidanka xoogga dalka qeybta 60-aad ee ka hawlgala degaanada Koonfur Galbeed ayaa saraakiisha iyo ciidamada kaga digay in ay ku milmaan doorashada madaxweynaha ee la qorsheeyay inay Dhacdo 17-ka bisha soo socota. General Ibraahim Yarow Isaaq oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka qeybta 60-aad ayaa saraakiisha iyo ciidamada ku amray in aysan tagi karin doorashada, sidaasi darteedna qof walba looga baahan yahay inuu guto waajibka uu leeyahay. Wuxuu sheegay ciidamada in aysan shaqo ku laheyn doorashada iyo arrimaha kale ee la xiriira siyaasadda, balse shaqadooda ay tahay sugidda ammaanka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka qeybta 60-aad General Ibraahim Yarow Isaaq ayaa tilmaamay askarigii lagu arka doorashada isaga oo ku milmay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. “Saraakiisha, saraakiil xigeenka, iyo ciidamada waxaan amrayaa in aysan tagi karin doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed, annnaga shaqadeena waxay tahay ammaanka, askargii lagu arka isaga oo ku milmay doorashada talaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doonaa”. ayuu yiri General Ibraahim. Magaalada Baydhabo ayaa waxaa si aad ah looga dareemayaa diyaar garowga ku aadan doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, taasi oo [Sii aqri]
Maamulka Galmudug “Ma Jirto Ciidamo Itoobiyaan ah Oo Fariisin Ka Sameystay Guriceel”
Wasiir xigeenka wasaaradda amniga Galmudug Mahad Xasan Maxamed Ayaa Ka hadlay Wararka Sheegaya in ciidamada Itoobiyaan Fariisin Ka sameeystay Duleedka Magaalada Guriceel ee Galmudug ayaa Beeniyay Wararkaasi Waxaana uu Shegay In ay ahaayeen Ciidamo u sii socda Dalkoodii Hooyo ee Itoobiya. Waxaana ay ahaayeen ciidamo ay ka war qabeen. Sidoo kale Waxa uu meesha ka saaray in fariisin ciidan ay ka sameeysteen degmada Guriceel, haseyeeshee wuxuu qiray in dhowr saac ay ku hakadeen degmada iyagoo sii maray degmada Balanbal. Xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamo Itoobiyaan oo ka baxay gobolka Hiiraan ay fariisimo ka sameysteen degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa warkaasi waxaa gaashaanka ku dhuftay xukuumadda Galmudug.
DHAGEEYSI:Madaxweyne Farmajo Iy R/Kheyre Oo Lagu Eedeeyay In ay Faragalineyaan Doorashada Puntland 2019
Dowlada federaalka ayaa lagu eedeeyay in ay faragalin ku sameyneyso arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada, xilli qaar kamid ah maamulladu ay galayaan doorashooyinka madaxtinimada. Siyaasi Ciise Maxamuud oo kamid ah siyaasiyiinta ka faalooda siyaasadda Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Puntland ku soo food leh. Wuxuu ku eedeeyay Dowlada Soomaaliya in ay faragalin ku heyso doorashooyinka dowlad goboleedyada oo ay doonayso in baarlamaan iyada daacad u ah ay ka soo baxaan gobollada sida uu hadalka u dhigay. Si gaar ah wuxuu farta ugu fiiqay Puntland oo uu sheegay in arrintaasi ay ka jirto, waxaana uu sheegay in ay ogsoon yihiin faragalinta ka soconaysa gudaha Puntland. “Dowladda federaalka ahi waqtigeedu waxay ku dhuminaysaa in ay beddasho baarlamaannada dowlad goboleedyada” ayuu yiri Siyaasi Ciise Maxamuud. Wuxuu intaas raaciyay in madaxda Villa Somalia aynaan ka war heynin in aysan ahayn dowlad xooggan oo dalkoo dhan heysa, islamarkaana awood ciidan oo dadka ay ku maquuniso aysan lahayn.
Ambasador Diinaari”Dekadda Muqdisho Waxaa Yaalla Konteenaro Taabuu Ah Oo Dowladdu Rabto”
October 30, 2018 F.G 0
Kadib kulan looga hadlayay Dhibaatooyinka Maandooriyaha Taabuuga oo Maanta lagu qabtay Muqdisho ayuu ka sheegay ambassador Diinaari dhibaatooyinka uu keeno Maandooriyaha Taabuuga. Waxa uu sheegay in badi Ardayda Soomaaliyeed rag iyo Dumar Intaba ay wada isticmaalaan Taabuuga,sigaar ah ayuu u sheegay ardayda dhigata Jaamacadaha Magalada Muqdisho. “Runtii waxa ugu nasiibdaran oo macalimiinta qaarkood inoo sheegeen in Gabadhaha Jaamacadaha dhigta ay si caadi ah u isticmaalaan Taabuuka,hadda Dekadda Muqdisho waxa yaalla Kunteenar ay dowladdu dooneyso inay Canshuurto waaan uga digeynaa ayuu yiri Ambasadoir Diinaari ahna Xoghayaha Xarunta tala soo jeedinta Somaaliyeed. Maalin ka hor Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabadi Xayir Maareeye ayaa sheegay in la mamnuucayo soo dejinta maandooriyaha uu ka mid yahay Taabuuga.
AKHRISO: Gudiga Doorashada Koonfur Galbeed Oo Soo Saaray Nidaamka doorashada
Gudiga Doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo bandhigay hab raaca loo dooran lahaa maaxweynaha maamulkaasi majaraha u qaban lahaa waxayna shaaciyeen jadwalka doorasahada loo mari lahaa. Kulan ay maanta Magaalada Baydhabo ku yeesheen Gudiga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayey ku go’aamiyeen qaabka ay u dhici laheyd doorashada maamulkaasi. Jawdwalkaani doorashada ayaa soo baxay xili dhawaanahaan gudiga doorashada maamulkaasi aad looga dhur sugaayey in ay soo saaran. Halkaan hoose ka akhriso jawdalka ay soo saareen Gudiga doorashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ciidamo Itoobiyaan ah Oo Fariisimo Militteri ka sameystey degmada Guriceel
Wararka ka imanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ay fariisimo ka sameysteen ciidamo Itoobiyaan ah oo wata taangiyo iyo hub kale oo culus. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan Itoobiyaanka ah ay ka soo ambabaxeen magaalada Dhuusamareeb iyagoo fariisimo ka sameystay duleedka magaalada Guriceel oo ah magaalo meel istiraatiiji ah ku taal. Hase ahaatee illaa hadda lama garanayo ujeedka ay ciidamadan fariisimada uga sameysteen magaalada Guriceel oo ah magaalo ay ku badan yihiin ururka Ahla Sunna. Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle ayaa dhowaan ugu baaqay shacabka iyo ciidamada Galmudug in ay u diyaargaroobaan shirka golaha iskaashiga Maamul Goboleedyda oo lagu qaban doono magaalada Dhuusomareeb, Ciidamada Itoobiya oo isugu jira kuwo hoos taga AMISOM iyo kuwo kale oo ka madax banaan ayaa saldhigyo ku leh deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud.